Ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro : Nanolo-tanana antsika ny AFD -
AccueilSongandinaAdy amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro : Nanolo-tanana antsika ny AFD
Ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro : Nanolo-tanana antsika ny AFD
Tafiditra ao anatin’ireo firenena misedra ny resaka fiovaovan’ny toetr’andro i Madagasikara. Ankoatra ireo ezaka efa vita sy ny fanampiana maro nentin’ireo firenena mpiara-miombon’antoka sasany, dia nanolo-tanana antsika hatrany amin’ny ady hatao amin’io fiovaovan’ny toetr’andro io ny AFD (Agence Française pour le Développement). Tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny asa sy ny fanamby voarakitra tao anatin’ny antotan-kevitra, izay nataon’i Madagasikara Sonia nandritra ny fifanarahana tamin’ny COP21 tany Parisy, io fanohanana ara-bola nataon’ny AFD io, mba ahafahana manatratra ny tanjona amin’izay ady hatao amin’ny fiovan’ny toetr’andro izay. Nisongadina tao anatin’io antontan-kevitra io moa ny fanenana ny fanapariahana ny entona mampiboaka hafanana eo amin’ny 14 isan-jato eo, mandra-pahatongan’ny taona 2030, izay vina napetraky ny Filoham-pirenena. Tafiditra ao anatin’izany ihany koa ny fampitomboana ny fahafahana mitroaka ny entona “carbone” eo amin’ny 32 isan-jato. Ireo zavatra roa sosona ireo no hotratrarin’i Madagasikara manomboka izao, ary isan’ny antony nanomezan’ny AFD tolo-tanana antsika.
Misy ny hetsika telo lehibe ahatongavana amin’izay tanjona napetraka, ka imasoana voalohany amin’izany ny fanamafisana ny traikefa mahakasika ny fahaiza-manao amin’ny ady hatao amin’ny fiovan’ny toetr’andro . Eo ihany koa ny fitan-tsoroka ho an’ireo mpiantsehatra rehetra izay miady amin’izany. Farany, dia misy ny fijerena tetikasa lehibe miisa telo, hiarahan’ny minisitera maromaro ahafahana miatrika hatrany io fiovan’ny toetr’andro izay miteraka voka-dratsy maro ho an’ny firenena io. Marihina fa ao anatin’ny efa-taona no hanatanterahana izany paikady rehetra izany. “Midika fa manam-piniavana ara-politika ny Filoham-pirenena amin’ny lafin’ny fiovan’ny toetr’andro . Izany rehetra izany ihany koa dia manome taratra fa miasa isika manatanteraka ny adidy rehetra izay hiarahana amin’ny firenena maro samihafa ahafahantsika mitondra ny anjara biriky entina hanatsarana ny fari-piainantsika eo amin’ny lafin’izay fiovan’ny toetr’andro izay”, hoy ny nambaran’ny minisitry ny Tontolo iainana, Ndahimanjara Johanita. Tsara tsindriana fa firenena voalohany amin’ireo 15 nahazo an’io famatsiam-bola io i Madagasikara. Omaly moa no nanatanterahana ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny AFD sy ny ministeran’ny Tontolo Iainana, ny Haivoary ary ny Ala, izay notanterahina teny Antsahavola.
Tsy niandry ela fa nandray ny andraikiny avy hatrany ny fitondram-panjakana manoloana tsaho naely fa tondraka ny rano any Toliara II vokatry ny fahavakisan’ny Reniranon’i Fiherena. Ny zoma teo no nidina tany an-toerana ny praiminisitra ...Tohiny